トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ ROM Works
Mashiinka pachinko The, waxaa had iyo jeer Jaha ROM. Sidaas daraaddeed, nooca wax waayo, ROM ah, waxaan jeclaan lahaa inaan eegno sida ay u shaqayso. Maxaa yeelay, ROM waa, ama loo ogaado Ghanna ah, ay ku jiraan barnaamijka, sida gaari iyo waxqabadka, waa mashiin, sida mishiinka kulan ee maskaxda ah.
Ghanna mashiinka pachinko qaatay nidaamka bakhtiyaa in gabi ahaanba itimaalka in lagu daydo oo dhan. (Waa keliya afka baarkiisa. Waxaad ma diidi karaan suurtagalnimada in jaaniska hit weyn, iwm Horukon waxaa isbedela ku xiran dukaanka.) _ X000D_
oo dhan horyaalka ciyaaraha ka, halkaas oo ay baaraan mashiinka pachinko in Hodorikyo, ku xiran kormeerka , laakiin dib u eegis ah oo aan jaaniska dhamaystiran yihiin midaysan si aanay u dhex mari. The qiimaha
qastiyey model kasta, si loo ogaado ka tirooyin qorituur ah, loo yaqaan dhamaystiran jaaniska ah. Sidaas daraaddeed, dhaqaaqin ROM waa in nooca farsamo, waxa aanu sharixi doona sida in ay noqoto hit weyn. Waxaa ka mid ah ROM, waxa ay leedahay count a by loox at random. Markaas, marka gaadho a qiimaha tirsi gaar ah, sidoo kale soo noqnoqda in soo celinta 0.
In miiska ciyaaraha ah, kubadaha in qof ahaa la bilaabay, taas oo ka bilaabanayso agagaarka sawirka inay soo galaan chucker bilowga, in ROM ee wakhtigaas, bakhtiyaa waxaa la sameeyaa, oo ku dhex jira soo-saarka iyo gaaraan, ama u iman ama hore u ku dhacay aad helay go'an.
iyo waqtiga bakhtiyaanasiibka soo socda, sidoo kale wuxuu bilaabaa inuu dib ugu soo guurto 0, waa bakhtiyaa xilligan ahaa chucker bilow ilaa iyo dhamaad ah. Tani waa sababta wax random sida roulette in jeedin, jaaniska waa xitaa 1 of 290 daqiiqo, ma aha in yimaado agagaarka mar walba jeestay 290 wareeg ah. In
, in ay noqon doonto ma itimaalka hit weyn lagama maarmaan, laakiin laga yaabo in aad u malaynayso, ROM in ka badan muddo ah, isku dayi doonaa in Chikazukeyo Ghanna ah, kaas oo la dhigay mishiinka. Waxaa, ama ahayd badan tahay in ay ku dhuftay in model kasta, waa in ay converges in jaaniska hit weyn.
waayo, in, ama waxaa jira waqti marka hit weyn waa soo noqnoqda, markii aan soo baxay Muddada aan, sida in ay jirto ama ay jiraan. Si fudud ayaa ku tilmaamay xiriirka ka dhexeeya ROM iyo Ghanna ah, laakiin mashiinka pachinko waa, oo dhan ee maamulka ROM ayaa u dhaqaaqay.
Reach labada dhuftay, bakhtiyaanasiibka la joogo marka uu soo gelayo ee laga yaabo bilaabi chucker noocee ah agaasimaha waxaa soo socda la joojiyo. Sidaas daraaddeed, halkaas oo aad riixdo aad ugu wanaagsan iyadoo aan loo eegayn sida button fursad, micnaheeda ma ahan in hit laga jari karo, anigu ma ku raaxaysan ha oo kaliya shaqo ee kaliya.
hubaal inuu wax akhriyo hit waa, xitaa ma aad qof awoodo in qowladda pachinko aadanaha. guushii Tani dhab ahaan damaanad, mana waxaan u malaynayaa in aysan awoodin in ay fahmaan aad si fiican aan markii hore qabsaday.
Pachinko, waxaan jeclaan wax waa khamaar mana kuwa wanaagsan in ganacsiga. waxa keliya oo samayn karaa, akhri la ruxruxo ee hit of ROM, ee ma aha oo kaliya oo ku saabsan xaqiiqada ah in ay isku dayaan in ay ku dhuftay in xaaladda.
Si kastaba ha ahaatee, qayb ka mid ah Pachinka ah waxay noqon kartaa ma aha in uu ugu yaraan u helaan bil ah 1 milyan oo yen.